बुद्ध लामा प्रथम नेपाल आइडल बन्दा निशान र प्रतापको भोट कति, किन देखाइएन प्रत्यक्ष प्रसारण ? – Etajakhabar
बुद्ध लामा प्रथम नेपाल आइडल बन्दा निशान र प्रतापको भोट कति, किन देखाइएन प्रत्यक्ष प्रसारण ?
काठमाडौं । प्रथम नेपाल आइडलको उपाधि पोखराका बुद्ध लामाले जितेका छन् । गएराती अबेर कतारमा सम्पन्न नेपाल आइडलको फाइनलमा बुद्ध लामाले ४ करोड ४८ लाख ४५ हजार २ सय ६३ भोट पाएको आधारमा उनलाई पहिलो भएको घोषणा गरिएको हो ।
एसएमएस र नेपाल आइडलको एप्समार्फत गरिएको भोटिङमा सबैभन्दा धेरै भोट पाएर उनी आइडल बनेको आयोजक एपिवान एचडी टेलिभिजनले जनाएको छ । एपिवान एचडी टेलिभिजनका अनुसार बुद्धले ४ करोड ४८ लाख ४५ हजार २ सय ६३ भोट पाए । निशान भट्टराई दोश्रो भए उनले ३ करोड ५० लाख ८६ हजार २ सय २३ भोट पाए भने १ करोड ३२ लाख ५२ हजार ८ सय ४९ भोट पाएका प्रताप दास तेश्रो भए ।
नेपाल आइडलको आयोजक एपिवान एचडी टेलिभिजनले कतारमा भएको फाइनललाई प्रत्यक्ष प्रशारणमा भने प्राविधिक गडबढीको कारण देखाउँदैन प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएन । विद्यालयमा रहँदा पनि निकै नै प्रतिभावान मानिएका बुद्ध पोखराको बिग एफएमद्वारा आयोजित २०७० सालको बिग आइकनमा शीर्ष ४ सम्म पुगेका थिए । उनले आफ्नो अध्ययन र संगीतलाई निरन्तरता दिन दोहोरी साँझमा पनि गीत गाएर निकै संघर्षपूर्ण जिन्दगी बाँचिरहेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ०७, २०७४ समय: ७:०५:१३